‘फुलबुट्टे सारी’ गाएकी युगान्डाकी गायिका वियोन्सेलाई भेट्ने मदनकृष्णको चाहना ! – Dailny NpNews
‘फुलबुट्टे सारी’ गाएकी युगान्डाकी गायिका वियोन्सेलाई भेट्ने मदनकृष्णको चाहना !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १०, २०७७ समय: ७:३८:११
काठमाडौं । पछिल्लो समयको चर्चित गीत ‘फूलबुट्टे सारी’लाई अफ्रिकी महिलाको स्वरमा सुन्न पाइने भएको छ । युगान्डाकी वियोन्से फ्यामेसीकोले युट्युब च्यानल डिका इन्टरटेन्टमेन्टबाट आफ्नो स्वरमा ‘फूलबुट्टे सारी’ सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
हालसम्म यो गीत नेपाली गायक मार्मिक लामा, मिलन नेवार, अरिष्मा सिवाकोटी, मदन कृष्ण श्रेष्ठको स्वरमा आइसकेको छ । फ्यामेसीकोले गाएको गीत सामाजिक सञ्जाल, टिकटकमा भाइरल बनेको छ भने डिका इन्टरटेन्टमेन्टको युट्युब च्यानलमा २ लाख ५ हजार भन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।
वियोन्सले भिडियोको सुरुवातमा विश्वका सबै सुन्दर मान्छेहरुका लागि गीत समर्पित गरेको उल्लेख गर्दै अझ विशेष रुपमा नेपालीका लागि गीत गाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले नेपालीलाई ‘आई लभ यू’ समेत भनेकी छिन् । यो गीत गाउने क्रममा वियोन्सले लयमा विशेष ध्यान दिएकी छिन् । यो गीतको भिडियोको छायांकन भने नेपालमा नै गरिएको हो ।
डिका गुरुङले निर्देशन गरेको भिडियोमा वियोन्सले नै अभिनय गरेकी छिन् । वियोन्सको स्वरमा ‘फुलबुट्टे सारी’ सुनेपछि गायक तथा कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले उनलाई भेटेर नै धन्यवाद दिने चाहना व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सेयर गर्दै गायिका वियोन्सले सपक्क फुल बुट्टे लुगा लगाएर कति राम्रो र मिठो गाएको भन्दै तारिफ गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्,‘ नेपाली गीत संगीतलाई यस्तरी मन पराई दिएकोमा यी गायीकालाई त एक पल्ट भेटेरै धन्यबाद दिन पाए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। तर घर कहाँ हो, युगाण्डाको कुन टोलमा बस्छिन, जाने बाटो कताबाट हो केहि थाहा छैन हाहा।’ उनले लेखेका छन् ।